भूईँमै सुताइएको छ, जेल परेका पूर्व आइजिपीलाई ! – Sourya Online
भूईँमै सुताइएको छ, जेल परेका पूर्व आइजिपीलाई !
सौर्य अनलाइन २०७४ असार ११ गते ८:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं, ११ असार । डिल्लीबजारस्थित कारागारको ‘‘क’ ब्लकमा एउटा लाइब्रेरी छ। जेलका कैदी–बन्दीलाई अध्ययनको उद्देश्यले लाइब्रेरीको स्थापना गरिएको हो। तर, त्यो लाइब्रेरी बुधबारदेखि नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपीहरूको सुत्ने कोठा बनेको छ। अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि बिहीबार आफैँ उपस्थित भई उनीहरू जेल गएका थिए। तर, डिल्लीबजार जेलमा सुत्ने पर्याप्त ठाउँ छैन। जसका कारण पूर्वआइजिपीहरू लाइब्रेरी कोठामा सुत्न बाध्य छन्। पढ्ने कोठा भएकाले त्यहाँ सुत्ने खाटसमेत छैन। उनीहरू भुइँमै सुत्छन्। यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट लिइएको हो ।